Momba anay - Vaomiera iraisam-pirenena momba ny atody
Ny International Egg Commission dia fikambanana mpikambana iray natokana ho an'ny indostrian'ny atody eran-tany. Manome fahafahana hihaona sy hianatra avy koa isika mandritra ny fotoana iainanay Fihaonambe isan-taona mitazona indroa isan-taona.
Ny IEC dia manana mpikambana ao amin'ny firenena 80 mahery ary miasa tsy tapaka amin'izany.
Ny IEC dia naorina tamin'ny Fihaonambe Egg International faharoa natao tany Bologna, Italia tamin'ny 1964.
Ny IEC dia tarihin'ny Birao Mpanatanteraka izay manao tatitra any amin'ny General Assembly. Ny Birao Mpanatanteraka dia misy ny mpihazona ny birao, ny mpikambana ao amin'ny birao tetikady maharitra, ary ny mpitarika ny vondrona miasa lehibe - Production, Egg Processors International (EPI), Marketing, toekarena ary ny maha-mpikambana.